महासंघद्वारा तीन ठूला सञ्चारगृहमा धर्ना – Sajha Pati
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले तीन ठूला सञ्चारगृह अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको प्रकाशन गृह नेपाल न्युज नेटवर्क इन्टरनेसनल प्रा.लि, कारोबार दैनिकको प्रकाशन गृह टीबीआई पब्लिकेसन्स प्रा.लि. र राजधानी दैनिकको प्रकाशन गृह राजधानी न्यूज पब्लिकेसन प्रा.लि. मा कालो ब्यानर सहित २ घण्टा धर्ना दिएको छ ।
नेपाल प्रेस यूनियनका कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारीले पत्रकारका जायज माग पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा भएको कार्यक्रमको नेतृत्व महासंघका सचिव उदय जिएम र लक्ष्मी पुनले गर्नुभएको थियो । कारोबार दैनिकमा महासंघका सचिव प्रकाश थापाको नेतृत्वमा भएको कार्यक्रमा महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले सम्बोधन गनुभएको थियो । उहाँले श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमीक नदिने, बेतलवी बिदामा राख्ने जस्ता कार्यले पत्रकारलाई अन्याय भएको भन्दै तत्काल समस्याको समाधान गर्न सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै राजधानी दैनिकमा भएको धर्ना कार्यक्रममा महासंघका सचिव शीतलप्रसाद महतोले गर्नुभएको थियो ।
उक्त धर्नामा महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले सम्बोधन गर्दै पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग पुरा नभए थप दबाव दिन सम्बद्ध सञ्चारगृहका सञ्चालकको घर घेर्ने, सञ्चारगृहमा सत्याग्रह, तालाबन्दी र भोक हड्तालसम्म गर्ने बारे महासंघमा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । प्रेस संगठनका बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज विश्वमणि सुवेदीले श्रमजीवी पत्रकारमा पक्षमा महासंघले गर्ने आन्दोलनमा संगठनको साथ रहने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा प्रेस संगठन नेपाल, नेपाल प्रेस यूनियन, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, फोटो पत्रकार क्लब, प्रेस नेपाल लगायत १३ वटा प्रेस संगठनको ऐक्यद्धता रहेको छ ।